About Information Technology: June 2016
Materials for CCNA/CCNP Study
CCNA/ CCNP လေ့လာသူတို့ အဖို့lab တွေ လုပ်တဲ့ အခါ softwares တွေ၊ IOS တွေ ကို ရှာနေရတဲ့ ဒုက္ခတွေ လွတ်ကင်းဖို့အကုန်လုံး စုပြီး Share လိုက်ပါတယ်။
၁) GNS 1.5
၃) Cisco Packet Tracer (32bit/64bit)
၄) Super putty
၅) Virtualbox 5.0.22
Posted by Ko Phyowailin at 11:36 PM No comments:
Labels: CCNA, CCNA Labs, CCNP, Softwares
Baisc Networking for CCNA
CCNA ကိုမလေ့လာခင် Basic Networking ကို အရင်လေ့လာရပါတယ်။ CCNA study guide တိုင်းမှာလဲ ပထမဆုံး chapter တိုင်းမှာ Basic Networking ဆိုပြီး ပါတယ်။ ဒါကြောင့် How to master of CCNA စာအုပ် ၇ဲ့ ပထမဆုံး chapter လေကို note ထုတ်ပြီး video training လုပ်ထားတာပါ။ လေ့လာကြည့်ပါ။
Slide Download Link
Posted by Ko Phyowailin at 10:08 PM 1 comment:
Labels: Basic Networking, CCNA
http://www.kophyoit.blogspot.com/ is the personal blog maintained by Phyo Wai Lin.
Phyo Wai Lin works as IT Assistant Manager for KBZ International Bank Division. He has 5+ years experience in IT environment.
Currently he holds the following certifications from leading technology vendors:-
Cisco Certified Network Professional (Routing and Switching)
Juniper Network Certified Associate (JNCIA-Junos)
VMware Certified Professional (Network Virtualization)
Microsoft Certified Solutions Associate (Windows Server 2012)
Posted by Ko Phyowailin at 8:07 AM No comments:
Cisco Packet Tracer7software download
Cisco Packet Tracer7ထွက်လာပါပြီ အောက်ပါ site တွင် လဲဝင်ရောက် download ရယူနိုင်သလို ၊ ကျွန်တော့် pcloud မှာ တင်ထားတဲ့ File ကို အလွယ်တကူလဲ download ရယူနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တင်ထားတာကတော့ windows 32/64 bit တွေ အတွက်ပါ ကျန်တဲ့ linux အတွက် တော့ site မှာ download ရယူလိုက်ပါ။ installationလုပ်ပြီးပါက https://www.netacad.com site တွင် အကောင့်တစ်ခု create လုပ်ပါ ပြီးရင် Packet Tracer 7ကို ဖွင့်ပြီး အကောင့်ကို login ၀င်ပြီးမှ သုံးလို့ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Ko Phyowailin at 1:47 AM 1 comment:
Valid Exam dumps for CCNP
CCNP routing & switching ကို self-study လုပ်ပြီး ဖြေမဲ့ ..ညီအကိုများကို အကြုံပြုချင်တာက
၁) Cisco Official Ebooks တွေကို မဖတ်နိုင်ရင်တောင် How to master CCNP စာအုပ်တွေကိုဖတ်ပြီးလေ့လာစေချင်ပါတယ်။
၂) CCNP Route video training from CBT nuggets တွေကို subtitle တွေနဲ့ လေ့လာပါ။
၃) ပြီးရင်တော့ ခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Exam Dumps တွေကို လေ့ကျင့်ပြီးဖြေရင်တော့ ၁၀၀% အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်အနေနဲ့ ကတော့ IPv6 ကို တော်တော်လေးလေ့လာထားပါ။ CCNP မှာ အများအားဖြင့်မေးပါတယ်။ CCNP_Tshoot မှာဆိုရင် IPv6 ကို အများဆုံး ticket ၅ခုလောက်ဖြေဆိုရပါတယ်။
Posted by Ko Phyowailin at 12:17 AM No comments:
OSPF_Part1 for CCNA
Routing Protocol တွေထဲမှာ OSPFကို CCNA Level နဲ့ သိထားသင့်တာလေးတွေကို Video Training လေး လုပ်ထားတာပါ။ Part 1 နဲ့Part2ဆိုပြီး နှစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်။ Part 1 က OSPF ကို configuration မလုပ်ခင်သိထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို ပြောထားတာပါ။ နောက် Part2ကတော့configuration ပြုလုပ်ပုံလေးတွေပါ။ Note တွေကိုတော့ How to master of CCNA စာအုပ်ကနေ ယူပြီးလုပ်ထားတာပါ။ လေ့လာကြည့်ပါ။ အခု share လိုက်တာက Part 1 ပါ။
Posted by Ko Phyowailin at 12:16 AM No comments: